မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်းဝိုင်ဖိုင်အခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » speed စမ်းသပ်ဝိုင်ဖိုင်, စမ်းသပ်ခြင်းအင်တာနက်ကော်နက်ရှင် speed
speed စမ်းသပ်ဝိုင်ဖိုင်, စမ်းသပ်ခြင်းအင်တာနက်ကော်နက်ရှင်မြန်နှုန်း APK ကို
အဆိုပါမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုနှင့် 3g 4g wifi application ကိုလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပေါ်တွင်သင်စမ်းသပ်ကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်းကူညီပေးပါမည်။ သင်အလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးနှင့်သင်ရုံ 1 ထိတွေ့နှင့်အတူသုံးနေသည့်ကွန်ရက်၏မြန်နှုန်း upload တင်လို့ရပါတယ်။
လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုရှာဖွေကြပါစို့! အဆိုပါ wifi speed ကို tester နဲ့ signal ကိုခှနျအားဗလ app ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ:
- တစ်ဦးကို manual သို့မဟုတ်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ် Perform
- အလိုအလျောက်သစ်ကိုကို Wi-Fi ကွန်ယက်၏အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်။
- စမ်းသပ်မှု wifi signal ကို function ကိုနှင့်အတူလက်ရှိ Wi-Fi ကွန်ယက်၏အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန် Option ကို
- ကွန်ယက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ် 3g 4g, LTE ကို Check, wifi speed ကိုစစ်ဆေးပါ။ အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်း tester app ကိုအတူ wifi signal ကိုခှနျအားကို Check
- ကိုမှန်ကန် tme အတွက် wifi connection ကိုနှင့်အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ် 2g 3g lte wifi Check
- download, အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ် 3g 4g wifi, တင်ခြင်းမြန်နှုန်း Check, wifi speed နဲ့ ping ရဲ့တိုင်းတာ။ စမ်းသပ်ခြင်း 4g မြန်နှုန်း
- အင်တာနက်ကို tester များ၏သမိုင်းခြေရာခံများပါဝင်သည်: upload နှင့် download speed က ping, ခွန်အားကွန်ယက်ကိုအမည်, ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ IP နဲ့စမ်းသပ်နေ့စွဲအချက်ပြ။
- DSL, ADSL, cable ကိုချိတ်ဆက်မှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရလေ့လာဖို့ 3g မြန်နှုန်းအင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ, 4g မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု, LTE ကိုကွန်ရက်များ။
- အီးမေးလ်, ဘရောက်ဇာကို, ဂိမ်းများကစားခြင်း, streaming များ, အမြန်နှုန်း tester ကအင်တာနက် app ကိုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု၏ကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်း Analyze
✓ Professional ကကွန်ယက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာများ, စမ်းသပ် wifi အစှမျးသတ်တိ function ကိုအတွက်စမ်းသပ်မှု wifi connection ကို
✓ကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများနှင့် Wi-Fi tester မြန်နှုန်း၏ရလဒ်များကိုဂရပ်များနှင့်စာရင်းဇယားပေါ်တွင်ပြသနေကြသည်
ယုံကြည်စိတ်ချရသောရလဒ်အတွက်✓ Worldwide ၏မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာဆာဗာကကွန်ယက်ကို
ပိုပြီးမျက်စိ-ဖမ်းဘို့✓နောက်ခံအကြောင်းကြားစာ option ကို
✓ကွန်ယက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုရလဒ်များအထွက်ကို ယူ. Allow
✓ 4g signal ကို tester, 3g signal ကို tester, wifi အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်
လျှောက်လွှာများ✓အသေးစားစွမ်းရည်, အစာရှောင်ခြင်း download,
Wi-Fi signal ကိုခွန်အားနှင့် 3g မြန်နှုန်းစစ်တိုင်းတာရန်✓အခမဲ့
စက္ကန့်အတွင်းကွန်ယက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ငါတို့သည်သင်တို့အရှိဆုံးတိကျ upload ရော download အမြန်နှုန်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ဉာဏ်စားသုံးမှုမျှနှေးကွေးဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစစ်ဆေးမှုများအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် Wi-Fi Speed ​​ကိုတိုင်းတာလျှောက်လွှာကိုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူသင့်ကွန်ယက်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးကူညီပေးပါမည်။ နေရာတိုင်းမှာနှင့်အခါတိုင်းသင်၏ကွန်ယက်မြန်နှုန်းစစျဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို download လုပ်ပါ။
သငျသညျအမြန်နှုန်းကိုအင်တာနက် tester app ကိုအကြောင်းကိုမဆိုမှတ်ချက်များရှိပါကကျွန်တော် app ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်အောင်အောက်ကမှတ်ချက်အီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်စွန့်ခွာပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲအသုံးပြုသူများအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူအကောင်းဆုံး application ကိုရောက်စေဖို့ချင်တယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကိုထောကျပံ့ဖို့5* ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်!
speed စမ်းသပ်ဝိုင်ဖိုင်, စမ်းသပ်ခြင်းအင်တာနက်ကော်နက်ရှင် speed
14.18 ကို MB
pi-Video Editor ကို & ဗီဒီယိုဆလိုက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို